मर्जरपछि शक्तिशाली बन्दै गएका छौं « Sahakari Nepal
मर्जरपछि शक्तिशाली बन्दै गएका छौं
प्रकाशित मिति : 28 February, 2016 9:46 am
उपाध्यक्ष–काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं
१मर्जरपछि सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?
मर्जरपछि हामी वास्तवमै शक्तिशाली बन्दै गएका छौं । हिजो पनि हामी अग्रणी स्थानमै थियौं । सात वटा संस्था एकीकरण भएपछि हामी झन् शक्तिशाली बन्न पुगेका छौंण् । एउटा बहुउद्देश्यीय र ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी एकीकरण भई नेशनल नमोबुबद्व बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बनेको हो । बसुन्धारामा रहेको नमोबुद्व बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेशनल बुद्व सेभिङ एण्ड क्रेडिट, गौतम बुद्व सेभिङ एण्ड क्रेडिट, सुपर स्टार सेभिङ एण्ड क्रेडिट, कोशिश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, द्वाखाचेली बचत तथा ऋण सहकारी, गोल्ड क्वाइन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकीकरण भई एकीकरणपछि हाम्रो सेवा केन्द्र ६ ठाउँमा हुनुपर्ने पाँच ठाउँमा मात्र छ । । एकीकरण भएको अहिले ७ महिना भइसकेको छ । त्यो बीचमा थुर्पै अफ्ठयाराहरु पार गर्दै आयौं । अफ्ठयाराबीचमा पनि अवसर प्राप्त गरेका छौं । अगाडि बढ्नका लागि एउटा मार्ग निर्देशन भयो । करिब ८ महिनाको गृहकार्यपछि हामीले सहकारी एकीकरण गर्न सफल भएका हौं ।
२अहिले मर्जरको कुरा व्यापक आइरहेको छ, सहकारी मर्जर कत्तिको समस्य रहेछ ?
पक्कै पनि सहकारी मर्जर गर्न समस्या छ । मर्जर गर्दा सबै कुरामा ध्यान पुु¥याउयन आवश्यक पर्छ । मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा पुग्दा पनि मर्जर नभई क्यान्सिल भएका उदाहरण हामी देख्न पाउँछौं । हामीले पहिलो चरणमा सहकारी मर्जर गरेका हौं । फेरी पनि हामी मर्जर गर्ने तयारीमा छौं । साधारणसभामा पनि विभिन्न सहकारी गाभ्न सकिने एजेन्डा पारित भइसकेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयले अनुमती दिएको खण्डमा हामी छिट्टै नै मर्जर गर्ने छौं । यस्ता कार्यक्रम देशव्यापीरुपमा लैजान चाहन्छौं किनकी जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौैंमा पनि म रहेकाले मर्जर अभियान देशभर लैजानुपर्छ भन्ने मैले नेतृत्व गर्न चाहेको छु । मर्जर अभियान जारी रहन्छ ।
३प्रस्तावित सहकारी ऐनमा एउटा वडामा एक सहकारी भन्ने अवधारणा ल्याइएको छ, यो कत्तिको संभव रहला ?
अब काठमाडौं उपत्यकाबाहिर संभावना हुन्छ । काठमाडांैै उपत्यकाको हकमा नीतिले, ऐनले तोकेबमोजिम गराउनका लागि फलामको च्युरा चपाए सरह हुनेछ । नियमन निकायदेखि लिएर सहकारी अभियान नै तदारुकतासाथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी अभियानसँग सरोकार नगरीकन जर्वजस्त गर्न खोजियो भने ऐन आउला तर प्रयोग गर्ने सरोकारवालासँग सरोकार राखेन भने त्यसले प्रभावकारीता दिदैँन ।
४तपाई काठमाडौं जिल्ला संघको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सहकारीको विकासका लागि संघले कस्तो काम गर्दै छ ?
अहिले जिल्ला सहकारी संघले निर्वाचनमा बिजयी भएर आइसकेपछि दुर्ईतीन घटना बोहोर्नुप¥यो । भूकम्प, नाकाबन्दीको सामाना गर्नुप¥यो । भूकम्पपछि जिल्ला संघमार्फत हामी धेरै पीडितकहाँ पुग्यौं । ५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेका छौं तर त्यसअनुरुप काम गर्न भने सकेका छैनौ । हाम्रा काम स्वतस्र्फुत अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । तालिम, शिक्षाको कुरामा जोड दिइरहेका छौं । नियमन निकाय अनुगमन गर्न जाँदा जिल्ला संघको प्रतिनिधि राखेर जानुपर्छ भन्दै आएका छौं । यसले सरलीकृत भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । केही नजानेका कुरामा हामीले सहकारीकर्मीलाई बुझाउन पनि जरुरी छ । डिभिजनसँग सहकार्य गर्न खोजेका हौ तर अझै संभव हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा नियमन निकाय आयो भने भाग्ने चलन पनि छ । जिल्ला संघबाट आयौ भन्दा पनि आज नआउनुस् है सर भन्ने अवस्था छ । जहाँ त्यस्तो अवस्था छ, बिस्तारै न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।
५सहकारी ऐनको मस्यौदा जतिसुकै ड्राफ्ट भएपनि अझै ऐन आउन सकेको अवस्था छैन् । सहकारीको बिकासका लागि कस्तो ऐनको परिकल्पना गरेको छ, सहकारी अभियानले । अर्को सहकारीको विकृति हटाउन संघहरुको भूमिका हुदैँन ?
विकृति, विसंगति हुदैँ हुदैँन भन्ने नहुन सक्छ । हामीले जन्माएका सबै सन्तान उस्तै हुन्छन् त । कहिलेकाही समस्या आउने भन्ने कुरा बेग्लै हो । सर्वप्रथम त यो ऐन स्टेक होल्डरसँग विस्तृत छलफल गरेर आएको ऐन होइन । जति छलफल भएपनि काटकुट गर्दै मिलाउँदै ल्याइएको ऐन हो । हामीले जे जे भने पनि हुन्छ भन्ने अर्को पटक आउँदा अर्कै हुने परिपाटी थियो । सरोकारवाला निकायलाई वाइपास गरेर आउन लागेको यो ऐन यदी पारित भएछ भने पनि लागु गर्न कठिन छ । सरोकारवाला निकायले चाहे अनुकुलको ऐन बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । वर्तमान समस्या सुल्झाउने एवम् सहकारीबीच स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा हुन सकोस् । सहकारी सदस्य केन्द्रित हुन सकेको छ्र्रैन् हामीबाट पनि केही कमजोरी भएको छ । तर एकैचोटी कानुन ल्याएर जर्वजस्ती लाद्नु हुदैँन भन्ने हाम्रो तर्क हो ।